समाज Archives - Page 180 of 189 - Dna Nepal
एउटै दुर्घटनामा दुई वडाध्यक्षको मृत्यु, चितवन काँग्रेस शोकमा ७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०९:११
चितवन, फागुन ७ । चितवनको खैरहनि नगरपालिका वडा नं ४ र ५ का वडाध्यक्षको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । रत्ननगर नगरपालिका–३ शान्तिचोकमा गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा खैरहनी नगरपालिका –४ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारी र विश्वविजय बस्नेतको मृत्यु..
म्याग्दीबाट घुस खाने प्रहरी पक्राउ ६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०७:३९
पोखरा, फागुन ६ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी घुसकाण्डमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीमा जागिर लगाईदिने भन्दै १ लाख ६० हजार मागेका प्रहरी हवल्दार कुलबहादुर बिसि पक्राउ परेका हुन् । उनीमाथी अनुसन्धान भैरहेको..
भाग्यमानी गोरखा–कास्कीलाई फापेन प्रदेश सरकार ५ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०२:३१
पोखरा, फागुन ५ । सँधैजसो राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गरिरहने गोरखा संघीय संरचनामा पनि भाग्यमानी रह्यो । नयाँ संरचनाले प्रदेश सरकार गठन गर्दा सबैभन्दा बढी भाग्यमानी गोरखा भयो । प्रदेशमा ७ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाईने निर्देशन छ । यति सानो..
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर गल्ती (केके छ गल्ती ?) ३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १५:४२
पोखरा, फागुन ३ । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको हतारोले राष्ट्रपति कार्यालयबाट गम्भीर गल्ती भएको भेटिएको छ । सुरुमा मिति विगारेर निकालिएको विज्ञप्तीमा मिती विग्रिएको थियो । समाचारमा आएपछि त्यसलाई सच्याईयो । तर विज्ञप्तीमा अर्को ठूलो गल्ती छ,..
छोरीलाई बलात्कार, बाबुलाई बन्चरो प्रहार
पोखरा, फागुन ३ । एक व्यक्तिले लमजुङ राइनस नगरपालिका ६ सालफेदीमा एक युवतीलाई जबरजस्ति करणी गरेका छन् । लमजुङ राइनस नगरपालिका ६ सालफेदी बस्ने वर्ष १५ कि एक युवतीलाई सोहि स्थान बस्ने वर्ष ५६ बर्षिय ज्ञानबहादुर लामाले जबरजस्ति करणी गरेको प्रदेश ४..
पोखरामा प्याराग्लाईडिङ दुर्घटना, एकजनाको मृत्यु २ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:५२
पोखरा, फागुन २ । पोखरामा प्याराग्लाईडिङ दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । सराङकोटबाट उडेको प्याराग्लाईडिङ तालमा खस्दा भारतीय नागरिक मारियाता शिवराजुको मृत्यु भएको हो । उनी कर्नाटक प्रदेशका हुन् । मौसममा आएको खरावीका कारण प्याराग्लाईडिङ..
कास्कीमा चिरपटले हानेर श्रीमतीको हत्या १ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १२:३४
पोखरा, फागुन १ । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा चिरपटले हानेर श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । सोमबार राती विकले आफ्नो श्रीमतीलाई चिरपाटे दाउराले टाँउकोमा प्रहार गरेपछि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । श्रीमान श्रीमती रक्सी..
सकियो एक महिने मकर मेला २९ माघ २०७४, सोमबार १२:४०
त्रिशूलीमा जिप बेपत्ता सिँचाइ सचिवको शव फेला २७ माघ २०७४, शनिबार ०६:१२
धादिङ, माघ २७ । त्रिशूली नदीमा जिपसहित हराएकामध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । नेपाल सरकारका सिँचाइ सचिव रामानन्द यादवसहित चढेको बा २ झ ३१४० नं को जिप बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटमा आज बिहान दुर्घटनामा परेको थियो । हराएकामा सचिव यादवलाई..
मनकारी जोडी-सेवा आश्रामलाई साढे ३ लाख दान ! २६ माघ २०७४, शुक्रबार १२:३७
पोखरा, माघ २६ । स्थानीय एक नवविवाहित जोडीले विवाहमा प्राप्त लाखौँ दक्षिणा भरतपुरस्थित मानव सेवा आश्रममा रहेका असहायलाई सहयोग गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १२ बसपार्ककी सोनिया गुरुङ र पोखराका विशाल गुरुङ बिहिबार वैवाहिक बन्धनमा..